Customer success is your success! - Sales Training Programs by Charisma
Customer success is your success!
အောင်မြင်တဲ့ စွန့်ဦးတီထွင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေနှင့် အရောင်းသမားကောင်းတွေမှာ မိမိ၏ ထုတ်ကုန် (product) & service (ဝန်ဆောင်မှု) တွေကိုသုံးရတာ ကျေနပ်ပျော်ရွှင်နေတဲ့၊ လိုအပ်ရင်လည်း အချိန်မရွှေးလက်တွဲလုပ်ဖို့ ရည်ရွှယ်ချက်ရှိတဲ့ သစ္စာရှိ ဖောက်သည်ကောင်း (loyalty customers) တွေ ရှိပါတယ်။
ဒီလိုဆို မေးစရာရှိလာတာက ဖောက်သည်ကောင်းတွေ ရှိလာအောင် ဘယ်လိုလုပ်ယူရမလဲ?
နားထောင်ပါ (listening skill) – ခေတ်မမှီတော့တဲ့ အရောင်းသမားတော်တော်များများက တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့ ဈေးရောင်းခြင်းအနုပညာမှာ ဒီအချက်ကို သတိမထားမိတက်ကြပါဘူး။ အရောင်းသမားလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ တော်ကီကောင်းရမယ်၊ ပါးစပ်က (မိမိ Product & Service ဘယ်လိုကောင်းကြောင်း) ကရားရေလွှတ် တတွတ်တွတ်ပြောမယ်ဆိုတာ ၁၀၀% မမှန်တော့တဲ့ concept တစ်ခုပါ၊ အောင်မြင်တဲ့ အရောင်းသမားတစ်ယောက်ဟာ ကိုယ့် ဖောက်သည်၏ လိုအပ်ချက် (requiements) နှင့် ဒုက္ခ (pain) တွေကို လျှော့ချဖြေရှင်းပေးနိုင်ပြီး သူနဲ့ ကိုက်ညီမယ့် ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ထုတ်ကုန်ကို ဖန်တီးပေးနိုင်သူဖြစ်ရပါမယ်။ “Sell the problem you solve. NOT THE PROBLEM!”
Let customers know what you are doing for them ကိုယ်သည် ကိုယ့်ရဲ့ ဖာက်သည်တွေအတွက် ဘယ်လိုကူညီပေးနိုင်မလဲဆိုတာ ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ သိပါစေ။ တခါတလေ ဖောက်သည်တွေကိုယ်တိုင်က သူတို့အတွက် ကိုယ်ဘယ်လိုကူညီပြီး လုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတာကို ဖုန်းဆက်ပြီးအသိပေးတာကို သဘောကျတက်ကြပါတယ်။ စိတ်ပညာသဘောအရလည်း ကိုယ့် ဖောက်သည်ဟာ ကိုယ်နဲ့ဆိုရင် အရေးပေးဆက်ဆံခံရတယ်လို့ ခံစားစေတယ်။ အခြေအနေမတိုက်ဆိုင်လို့ အလုပ်မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ရင်တောင် ကိုယ် သေချာကူညီပေးခဲ့ခြင်းရဲ့ ရလာဒ်အဖြစ် အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာလို့ အလုပ်ဖြစ်တော့မယ်အချိန်ကျရင် ကိုယ့်ကို အရင်ဆုံး ဆက်သွယ်ပါလိမ့်မယ်၊ မယုံမရှိပါနှင့်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဘယ်သူနဲ့ ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ ပြန်ဆုံမယ်ဆိုတာ မသိနိုင်တဲ့အတွက် အကောင်းဆုံးတွေကိုသာပေးဖို့ ကြိုးစားပါ။
တစ်နပ်စား မကြံပါနှင့် – မယုံမရှိပါနှင့်၊ ရောင်းရပြီးရောဆိုတဲ့ စိတ်ဓါတ်မကောင်းတဲ့ အရောင်းသမားလည်းရှိပါတယ်။ ဥပမာပြောရရင် Computer system တစ်ခုရောင်းတဲ့သူဆိုပါတော့၊ ဖောက်သည်က သူကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်တဲ့ အရာတစ်ခုမဟုတ်တော့ မသိလောက်ဘူးထင်ပြီး ဈေးတွေစွတ်တင် ထိုးမရောင်းပါနှင့်။ ဒါ့အပြင် ဟိုလူ့ကို ဘယ်လိုလှီး၊ ဒီလူ့ကို ဒီလိုလှီးလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ ရပ်ကွက်ပွဲစားဆန်ဆန် စိတ်ဓါတ်မျိုး မမွေးပါနဲ့။ “တစ်ခါစား” ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း တစ်ခါပဲစားရပါလိမ့်မယ်၊ ယနေ့ခေတ် စီးပွားရေးလောကဟာ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ဆက်စပ်နေသလို ပြိုင်ဖက်အချင်းချင်းတောင်မှ စကားပြောကြပါတယ်။ ဒီတော့ ရလာမယ့်အကျိုးအမြတ်ကတော့ နာမည်ပျက်ပြီး ဈေးကွက်မှာ လုပ်စားမရပဲဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ Pricing structure ကို သေချာတည်ဆောက်ပြီး ဖောက်သည်တိုင်းကို ထိုက်တန်တဲ့ ဈေးနှုန်းနဲ့ ရောင်းပါ။
Go extra miles – တက်နိုင်တာထက် ပိုလုပ်ပေးပါ၊ အဓိက,ကတော့ စေတနာပါပါနဲ့ လုပ်ပေးပြီး အမြဲကူညီဖို့ အဆင်သင့်ရှိနေခြင်းပါပဲ။ မှားသွားနိုင်ရင်တောင် စေတနာအမှားဖြစ်လို့ ခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Keep it personal – အလုပ်သဘောထက်ပိုတဲ့ ဆက်ဆံရေးရှိပါစေ။ တချို့ salesman တွေက အရောင်းဖြစ်ရင် ဖောက်သည်ကို မေ့လိုက်ကြပါတယ်။ မလုပ်ပါနှင့်၊ မိမိ ရောင်းလိုက်တဲ့ product or pervice ကို စိတ်ကျေနပ်မှု ရှိ/မရှိ အဆင်ပြေ/မပြေ တစ်လတစ်ခါလောက် ဖုန်းဆက်မေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှလည်း အဆင်မပြေတာလေးတွေရှိလာခဲ့ရင်တောင် တိုင်ကြားတဲ့အဆင့်မရောက်အောင် ထိန်းနိုင်မှာပါ။ ပြီးတော့ တခါတလေ နေ့လည်စာ အတူစားခြင်း၊ ညနေဖက် ဘီယာလေး တစ်ခွက်နှစ်ခွက်အတူသောက်ပြီး မိမိ customer ကို သိအောင်လုပ်ခြင်းက ခိုင်မာတဲ့ဆက်ဆံရေး တည်ဆောက်ခြင်းပါပဲ။
Transparency – ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိပါစေ၊ မသိရင် မသိဘူးပဲ ပြောပါ။ တချို့ အရောင်းသမားတွေက ဖောက်သည်က တောင်းဆိုလာတဲ့ အရာအားလုံးကို “Yes” လို့ ပြောခြင်းက ကောင်းတယ်ထင်တက်ကြပါတယ်၊ ရေရှည်ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ မလုပ်ပါနဲ့လို့ ပြောပါရစေ။ လုပ်ပေးနိုင်တာတွေကို ကူညီပေးပြီး မလုပ်ပေးနိုင်တာတွေကို ပွင့်လင်းကောင်းမွန်စွာ ငြင်းဆိုပါ။
Communication – နောက်တချက်က အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာကြောင့် အဆင်မပြေ နှောင့်နှေးကြန့်ကြာတာတွေရှိနေရင် အသိပေးပါ၊ မိမိဖက်ကလည်း ဘယ်လိုဖြေရှင်းနေတယ်ဆိုတာကို ကောင်းမွန်စွာ ရှင်းပြနိုင်ပါတယ်။ ရလာဒ်အနေနဲ့ ဖောက်သည်က ်ကျေနပ်မှုသိပ်မရှိရင်တောင် ကြိုတင်အသိပေးထားတဲ့အတွက် မလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာတွေ ဖြေရှင်းပြီးသား ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
Pay attention to your existing customers, no matter how small they are – တခါတလေ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဖောက်သည်ဟောင်းတွေနဲ့ ဖောက်သည်အသေးစားလေးတွေ (small accounts)ကို ဂရုစိုက်ဖို့မေ့နေတက်ကြပါတယ်။ ဖောက်သည်ဟောင်းတွေဆီကနေ အလုပ်သစ်နဲ့အမှာစာတွေ ထပ်ရလာနိုင်သလို cross-selling လည်း လုပ်လို့ရတယ်။ နောက်တစ်ခုက ဖောက်သည်အသေးလေးတွေကို အထင်မသေးပါနဲ့၊ သူတို့ဟာ ခင်ဗျားဆီက (အများကြီး) ဝယ်ယူအားမပေးနိုင်ပေမယ့် သက်ဆိုင်ရာ စီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာ လူသိများပြီး ဝင်ဆန့်တဲ့သူတွေ ဖြစ်နေတက်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကိုယ်ကိုတိုင်လည်း အလုပ်တွေလုပ်ပြီး ကြိုးစားနေသလို ကိုယ့်ရဲ့ ပြိုင်ဖက်တွေနဲ့ ဖောက်သည်တွေဟာလည်း သူတို့ရဲ့ စီးပွားရေးကို ကြီးထွားလာအောင် စက္ကန့်မလပ် ကြိုးစားနေကြမယ်ဆိုတာ သံသယဖြစ်ဖွယ်မရှိပါဘူး။ ဒီတော့ ကိုယ် ဂရုသိပ်မစိုက်ခဲ့တဲ့ customer သေးသေးလေးတွေက တချိန် (သူတို့ရဲ့ business ကြီးထွားလာပြီး) စီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာ အောင်မြင်လာတဲ့အချိန် ကိုယ့် ပြိုင်ဖက်ဆီကိုရောက်သွားတော့မှ မျက်ကလဲဆန်ပြာဖြစ်ပြီး ပြန်လည်ဂရုစိုက်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုမျိုးဟာ မကောင်းပါဘူး။ လွတ်တဲ့ငါး ကြီးနေလို့ မရတော့ပါဘူး၊ နောက်ကျသွားပါပြီ။“Customer success is your success” ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း ဖောက်သည်တွေရဲ့ အောင်မြင်မှု၊ စိတ်ချမ်းသာမှုသည် ကိုယ့် အောင်မြင်မှုနဲ့ တိုက်ရိုက်အချိုးကျလို့နေပါတယ်။ ဒီလို ဖောက်သည်မျိုးတွေကပဲ သစ္စာရှိဖောက်သည်ကောင်းတွေ ဖြစ်လာနိုင်မှာပဲ။ သစ္စာရှိဖောက်သည်ကောင်းတွေ ရလာတဲ့နေ့၊ ထိုဖောက်သည်တွေဆီကနေ referral တွေ ရလာတဲ့နေ့ဟာ အရောင်းသမားတွေအဖို့ ချိုမြိန်ပျော်ရွှင်ခြင်းနေ့ရက်တွေ ကျရောက်လို့ရလာပြီ။